Rotary Table Tsa ANDIAN-DAHATSORATRA
Tsa ANDIAN-DAHATSORATRA Rotary LOHA endri-javatra: 1.TSA andian-dahatsoratra Rotary latabatra dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra fanampin-javatra ny fikosoham-bary milina. 2.It no be mpampiasa ny tondro mankaleo, mihaohao, faribolana fanapahana, faribolana curve fiaramanidina sy ny ampahany sns fandidiana. 3.As ny safidy, table hafa famatsiana flange hafa, dia ho feno flange misaraka. Raha tsy izany, mizara amin 'ny takelaka izay manome avy amin'ny safidy dia afaka nirakitra anarana rehetra T ...
Rotary Table tsk ANDIAN-DAHATSORATRA
TSL ANDIAN-DAHATSORATRA Rotary LOHA MAMPIAVAKA: 1.TSL mitsangana sy mitsivalana Rotary latabatra dia iray amin'ireo tena fanampin-javatra ny milina nitotoana azy, dia ampiasaina amin'ny tondro mankaleo, 2.milling, faribolana fanapahana, toerana miatrika sy mankaleo lavaka milina sns ny fikosoham-bary. 2.Rotary latabatra mitsangana amin'ny tailstock miara-miasa, dia mety ampiasaina amin'ny asa sarotra ho an'ny faribolana fanondroana mahasorena sy ny fikosoham-bary. 3.As mpanjifa 'requirem manokana ...
Lathe Machine , hiondrika Machine , Lathe , Metal Lathe , Sheet Metal Machines , marindrano Lathe ,